Waxa uu ahaa Wasiir ka tirsan Afganistan Hada Waa Cunto Geeye, ( Nolosha Yurub)
HomeWararka CaalamkaWaxa uu ahaa Wasiir ka tirsan Afganistan Hada Waa Cunto Geeye, ( Nolosha Yurub)
Warbaahinta caalamka qaarkood ayaa si weyn u hadal haya sheekada Wasiir katirsanaa dowladii hore ee Afganistan oo u qaxay dal kuyaala Qaarada Yurub iskuna bedelay shaqaale cunto geeye ah .
Wasiirkii hore ee Isgaarsiinta ee dalka Afganistan, Sayid Axmed Shah Saadaat ayaa isku bedelay cunto geeye u shaqeeya shirkad cuntooyinka ka ganacsatada oo kutaala magaalladda Leipzig ee Bariga Jarmalka oo hada kunool yahay.
Sayid Axmed Saadaat ayaa ahaa Wasiir katirsan xukuumada Afganistan sanadihii 2018-kii ilaa 2020-kii ,waxaana wasiirkan marka uu xilka ka tagay sanadkii hore 2020-kii tagay dalka Jarmalka uu ka bilaabay nolol cusub oo ka duwan tiisii hore.
Waxa uu sheegay Wasiir hore Saadaat in uu hada ka shaqeeyo Shirkadda Cuntooyinka ee Livrando ee Jarmalka, waxa uuna xusay in uu Baaskiil ku geeyo cuntooyinka Xafiisyada iyo Guryaha laga soo dalbado.
Wasiirkan duruufta kadaba timid ayaa sheegay in sababta shaqadan u doortay ay tahay in ay ka dhamaatay qarashkii keydka u ahaa ayna dantu ku qasabtay in nolol cusub bilaabo iskuna bedelo cunto geeye baaskiil wata.
Sayid Axmed Saadaat ayaa ah aqoonyahan wax kasoo bartay kana soo baxay Jaamacadda Oxford University ee dalka UK, waxa uuna kasoo shaqeeyya in ka badan 20-dal, isagoona ugu dambeyn Wasiirka isgarasiinta kasoo noqday dalkiisa.